Non kpara T-uwe elu akpa
Velcro Kwesịrị akpa
Gịnị bụ mmetụta nke akpa mkpuchi mkpuchi gburugburu ebe obibi na ngwa ahịa ụlọ ọrụ?
Post oge: Apr-28-2021
Gịnị bụ mmetụta nke akpa mkpuchi mkpuchi gburugburu ebe obibi na ngwa ahịa ụlọ ọrụ? Non kpara gburugburu ebe obibi nchebe akpa bụ ụdị nke nkwakọ akpa mere nke na-abụghị kpara akwa. Ọ bụ ụdị nkọwapụta ụdị mpempe mpụga na ike nke ihe oyiyi zuru oke nke ngwaahịa a. Ọ bụ ụdị o ...GỤKWUO »
Olee otú ịmata ọdịiche dị na ọkpụrụkpụ nke akpa na-eme ka ndị na-abụghị kpara akwa?
Post oge: Apr-27-2021
Olee otú ịmata ọdịiche dị na ọkpụrụkpụ nke akpa na-eme ka ndị na-abụghị kpara akwa? Na mmepụta nke akwa na-enweghị akwa, mgbe ụfọdụ, ọkpụrụkpụ nke akwa na-enweghị isi adịghị mma. Kedu ihe ọ bụ? Ihe ndị a bụ ka ị kwuo maka ihe nwere ike ịkpata enweghị ọkpụrụkpụ nke akwa na-abụghị kpara n'okpuru ...GỤKWUO »
Ihe na-atụle na price ngụkọta oge nke na-abụghị kpara akpa
Post oge: Apr-26-2021
Ihe ndị a ga-atụle na ngụkọta ọnụahịa nke akpa a kpara akpa Kedu ihe ndị a ga-atụle na ọnụego maka akpa ndị na-abụghị akpa? Ugbu a, e nwere ọtụtụ ahaziri na-abụghị kpara akpa. Ọtụtụ ndị na-emepụta na ụlọ ahịa kwesịrị ịhazi akpa ndị na-abụghị akwa, ma kwalite ụdị ngwaahịa ha ...GỤKWUO »
Ihe na - emetụta ọnụahịa akpa ndị na - abụghị akpa
Ihe ndị metụtara ọnụahịa nke akpa ndị na-esighi na Post oge okike: November 02, 2011 13:36 kwuru: 1 chọgharịa: 165 onyinye Na China taa, site na imikpu echiche ala-carbon, ọchịchọ maka akpa nchekwa gburugburu ebe obibi na-arịwanye elu. Iji weghara òkè ahịa, mmadụ ...GỤKWUO »
Ọnụ ọgụgụ nke akpa ndị a kpara akpa dị obere, nke na-abawanye ụgwọ!
Post oge: Apr-24-2021
Ọnụ ọgụgụ nke akpa ndị a kpara akpa dị obere, nke na-abawanye ụgwọ! N'oge a, nhazi ngwaahịa abụrụla isi ụzọ niile na ndụ. A na-etinyekwa akpa ndị a kpara akpa. Agbanyeghị, maka ndị na-achọ ya, nhazi ahaziri nwere uru na ọghọm ya Gịnị mere i ji kwuo otú ahụ? Zhdbag, dị ka a pr ...GỤKWUO »
Kedu ihe kpatara ọnụahịa obere obere ogbe ndị eji akwa akwa?
Post oge: Apr-23-2021
Kedu ihe kpatara ọnụahịa obere obere ogbe ndị eji akwa akwa? Ọ na-eju ọtụtụ ndị ahịa anya ịhụ na nkọwapụta anyị dị elu karịa ọnụahịa nke otu akpa 5000 na-enweghị ihe mkpuchi mgbe m nyere iwu akpa 1000 na-enweghị akwa? E nwere nnukwu ọdịiche na unit ọnụahịa nke ọtụtụ iri puku akpa, yabụ anyị chere ...GỤKWUO »
Kedu otu esi amata ụdị akwa akwa nke mkpuchi mkpuchi gburugburu ebe obibi?
Kedu otu esi amata ụdị akwa akwa nke mkpuchi mkpuchi gburugburu ebe obibi? Kedu ka esi amata akwa na-enweghị akwa? Nke mbụ, anyị kwesịrị ịmara na ihe eji eme ihe na akpa na-enweghị akwa bụ ihe na-abụghị nke a kpara akpa, nke a makwaara dị ka ihe na-abụghị akwa. Ma anyị na-akpọkarị ya na-abụghị kpara. Na ahia nke anaghị ekpuchi taa, ...GỤKWUO »
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti ndị na-abụghị kpara akpa na akwụkwọ akpa?
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti ndị na-abụghị kpara akpa na akwụkwọ akpa? Anyị na-ahụkarị ụdị akpa abụọ, otu bụ akwa na-enweghị akwa; Otu bụ akwụkwọ. Non kpara akwa nwere ike kere n'ime kpara akpa, na-abụghị kpara akpa, na-abụghị kpara akpa ịzụ ahịa, wdg Akwụkwọ nwere ike kere n'ime obere ọcha katọn akpa, uwe ...GỤKWUO »
Kedu ihe dị mma karịa akpa ịzụ ahịa na-abụghị ndị a kpara akpa na ihe eji akpa akwụkwọ?
Kedu ihe dị mma karịa akpa ịzụ ahịa na-abụghị ndị a kpara akpa na ihe eji akpa akwụkwọ? 1, reusability nke na-abụghị kpara akpa ịzụ ahịa. Uru nke akpa ịzụ ahịa na-abụghị kpara bụ na enwere ike iweghachi ya ọtụtụ oge. Enwere ike iji ya mee akpa akwụkwọ, ọnụahịa ụlọ ọrụ dị elu karịa nke ịzụ ahịa na-abụghị kpara b ...GỤKWUO »
Etu esi ebipụta okwu na akpa na-abụghị nke?
Olee otú ibipụta okwu na nonwoven akpa？ Ugbu a, ọtụtụ ahịa hazie ndị na-abụghị kpara akpa site n'ibi akwụkwọ nke ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ nzukọ ha logo na ederede. Enwere ike ibipụta akara ngosi na akpa ndị a na-abụghị ndị a kpara site na ụzọ ndị a: 1. Silk screen printing Nke a bụ ụzọ a na-ahụkarị maka ibipụta akwụkwọ, ọnụahịa adịghị mma, yabụ m ...GỤKWUO »
Olee otú ka mma ndụ nke nonwoven akpa?
Post oge: Apr-18-2021
Olee otú ka mma ndụ nke nonwoven akpa? N'oge a, na ọha mmadụ a na-enweghị mmetọ, akpa ịzụ ahịa na-enweghị akwa bụ ihe a ma ama karịa akpa rọba nke na-emetọ gburugburu ebe obibi. Agbanyeghị, ụdị akpa a dị iche na ụfọdụ akpa azụmaahịa a na-ere n'ahịa, na-ekwukarị, ọ bụrụ na ...GỤKWUO »
Kedu ụdị teknụzụ bụ akpa na-anaghị akpa akwa maka akwa sweta?
Post oge: Apr-17-2021
Kedu ụdị teknụzụ bụ akpa na-anaghị akpa akwa maka akwa sweta? A na-ejikarị akpa ákwà na-enweghị akwa iji jide cashmere sweta. Otu akụkụ bụ akwa a kpara, akụkụ nke ọzọ bụ PVC ma ọ bụ ha niile bụ akwa akwa anaghị akwa akwa E nwekwara ụdị cashmere sweta akpa, nke bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ...GỤKWUO »